သတင်း Archives - Padaethar
လူကြီးတွေပင်ရဖို့မလွယ်တဲ့ အဘိဓမ္မာမဟာဘွဲ့ကို ရရှိသွားတဲ့ အသက်အငယ်ဆုံး ၁၅ နှစ်သားလေး
April 6, 2021 by Padaethar
ဓမ္မရသနောက် တစ်ကောက်ကောက် လိုက်ခဲ့သူ (သို့မဟုတ်)အသက်အငယ်ဆုံး အဘိဓမ္မာမဟာဘွဲ့ရ ၁၅နှစ်သား သူလိုလူ(၅၂)ကြိမ်မြောက် အဘိဓမ္မာ စာတော်ပြန်ပွဲရဲ့ ထူးခြားချက်ထဲမှာ ၁၅နှစ်သား တစ်ဦးရဲ့ မဟာဘွဲ့ ရရှိမှုဟာ ဘယ်လိုမှ ချန်လှပ်ခဲ့လို့ မရနိုင်ပါဘူး။ လူပုဂ္ဂိုလ်များအတွက် သတ်မှတ်ပြဌာန်းထားတဲ့ ကျမ်း အစိတ်အပိုင်း ၁၅ပိုင်းကို မောင်ဟန်ထွန်းအောင်ဟာ ဒီကနှစ်မှာ ရေးဖြေဘာသာစုံ ဂုဏ်ထူးနဲ့အတူ လှလှပပ အဆုံးသတ်နိုင်ခဲ့ပါ…. တယ်။၁၅ကျမ်းကို ၄နှစ်အတွင်း ထူးချွန်စွာ ဖြေဆို အောင်မြင်ခဲ့တာမို့ ကြားသိရသူတိုင်း အံ့သြ ဝမ်းသာကြမယ် ထင်ပါတယ်။တစ်ကယ်တော့မောင်ဟန်ထွန်းအောင်ဟာ အသက် ၁၁နှစ် အရွယ်ကတည်းက အစိုးရအဘိဓမ္မာ ၃ဆင့်လုံးကို အောင်မြင်ကာ အဘိဓမ္မာဥယျာဉ်ကြီးထဲကို စတင် ရောက်ရှိလာခဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်။ ဓမ္မရသကို သိရှိခံစားဖူးတဲ့ ပျားပိတုန်းလေးတစ်ကောင်အဖို့ ဒီဥယျာဉ်ကြီးထဲကနေ ပြန်မထွက်နိုင်တော့တာ သိပ်တော့လည်း မဆန်းလှပါဘူး။အဲဒီနှစ်မှာပဲ ဓမ္မသာကစ္ဆာ … Read more
သူနာပြုဆရာမလေး သဉ္ဇာဟိန်းရဲ့ အိမ်ပြန်ခရီးနှင့် ဟောပြောချက်မှတ်တမ်း ဗီဒီယို
March 29, 2021 by Padaethar
သူနာပြုဆရာမလေးရဲ့ အိမ်ပြန်ခရီး မုံရွာမှာ မတ်လ၂၈ရက်နေ့ကရတနာပုံ ပစ်ခတ်မှုမှာ ကျဆုံးခဲ့တဲ့ ကနီနယ် ဇာတိ အာဇာနည် သဉ္ဇာဟိန်း ဒီကနေ့မနက်မှာပဲ သူ့နယ်ကို ပြန်သွားခဲ့ပါပြီ။ မိဘတွေက တော်လှန်ရေးမှာ တားဆီးမှာကြောက် လို့မုံရွာမှာ အဆောင်နေပြီး တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့သူမက မြို့လယ်ကနာရီစင်မှာ မကြောက်တရားကို လူငယ်တွေအတွက် မျှ​ဝေခဲ့တယ်။ နယ်သူ နယ်သားတွေက လမ်းဘေးဝဲယာကနေ သူတို့ရဲ့ သူရဲကောင်းမလေးကို လက်သုံးချောင်းထောင်ပြီး ၀မ်းနည်းစွာကြိုဆိုနေကြပါတယ်။ ဓူဝံကြယ်ပြီးရင် အလင်းလက်ဆုံးကြယ်က မုံရွာလူငယ်လို့ မှတ်ထားလိုက်ဆိုတဲ့ စာကြောင်းကို သူ့ရဲ့အကောင့်မှာတင်ခဲ့တဲ့သူနာပြုဆရာမလေး။ မုံရွာရဲ့ အလင်းလက်ဆုံးကြယ်တပွင့် အဖြစ်ကျနော်တို့ ၀မ်းနည်းပူဆွေးစွာ မှတ်ထားလိုက်ပါပြီ။ ဇာတိမြေမှာ အေးချမ်းစွာအနားယူပါ…..။ကောင်းရာသုဂတိလားပါစေ။ Ko Thet unicode သူနာပွုဆရာမလေးရဲ့ အိမျပွနျခရီး မုံရှာမှာ မတျလ၂၈ရကျနကေ့ရတနာပုံ ပဈခတျမှုမှာ ကဆြုံးခဲ့တဲ့ ကနီနယျ ဇာတိ အာဇာနညျ … Read more
March 22, 2021 by Padaethar
အင်းစိန်ထောင်မှာဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ အကယ်ဒမီလူမင်းရဲ့လက်ရှိကျန်းမာရေးအခြေအနေ မင်္ဂလာပါ ပရိတ်သတ်ကြီး တို့ရေ ပုဒ်မ ၅၀၅(က) နှင့် အဖမ်းဆီး ခံလိုက် ရသော အကယ်ဒမီ လူမင်း နှင့် ပတ် သက် ပြီး သတင်း တွေ အမျိုး မျိုး ထွက်ပေါ်နေခဲ့ပါတယ်။ အကယ်ဒမီ လူမင်းဟာ အနုပညာလောကရဲ့ အောင်မြင်မှု ရှည်ကြာ စွာ ထိန်းသိမ်း ထားနိုင်တဲ့မင်းသားတစ်လတ် ဖြစ် ပြီး ပရိတ် သတ်ရဲ့ ချစ် ခြင်း မေတ္တာ ‌ကို အခိုင်အမာရရှိနေခဲ့တာ ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ လူမင်းဟာ မြန်မာနိုင်ငံ မှာ စစ်အာဏာ သိမ်းမှု စတင် ဖြစ်ပေါ် တဲ့ နေ့က စပြီး ပြည်သူနဲ့ အတူ ရပ်တည်ကာ လူထုဆန္ဒ … Read more
Categories သတင်း, အနုပညာသတင်း
ဖခင်ဖြစ်သူက ကျဆုံးသွားတာကြောင့် မိဘမဲ့ဖြစ်သွားတဲ့ကလေးတွေအတွက် တိုက်ခန်းလေးတစ်ခန်းပေးအပ်ပြီးတတ်နိုင်သလောက်ကူညီခဲ့တဲ့ ပြည်သူတချို့
ဖခင်ဖြစ်သူက ကျဆုံးသွားတာကြောင့် မိဘမဲ့ဖြစ်သွားတဲ့ကလေးတွေအတွက် တိုက်ခန်းလေးတစ်ခန်းပေးအပ်ပြီးတတ်နိုင်သလောက်ကူညီခဲ့တဲ့ ပြည်သူတချို့ ပြည်သူလူထုနဲ့အတူ ရဲစွမ်းသတ္တိအပြည့်နဲ့ပါဝင်ရင်း အသက်ပေးသွားရတဲ့ သူရဲကောင်းတွေအတွက်လည်းစေတနာရှင်ပြည်သူတစ်စုက ကျန်ရစ်သူမိသားစုကို ဝိုင်းဝန်းကူညီပေးနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကဆိုရင်လည်း လူထုလှုပ်ရှားမှုမှာ ပါဝင်တဲ့ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် ရှဟီဒီမာမွတ်ဘိုင်(ခ)ကိုသေးကတော့ မတ်လ(၁၅)ရက်နေ့မှာ ဦးခေါင်းကျည်ထိမှန်ခဲ့ပြီး မတ်လ(၁၆)ရက်နေ့ မနက်စောစော(၅:၃၀)မှာတော့ ကျဆုံးသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ကျဆုံးသွားတဲ့သူရဲကောင်း ကိုသေးမှာဆိုရင် သားသမီးတွေလည်းရှိတာကြောင့် ကလေးတွေကတော့ မိဘမဲ့ဖြစ်သွားရရှာတာဖြစ်ပါတယ်။ ရှဟီဒီမာမွတ်ဘိုင်(ခ)ကိုသေးရဲ့ သားသမီးတွေကတော့ သမီးကြီးရိုကိုင်ရာ(၁၂)နှစ်နဲ့ သားငယ် ရှာအ်ဗာန်(၇)နှစ် တို့ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုသေးက အသက်ရှိစဉ်တုန်းကဆိုရင် ရပ်ကွက်ထဲမှာ သူဝါသနာပါတဲ့ လျှပ်စစ်၊မီးပူ၊ပန်ကာ၊ပေါင်းအိုး စတာတွေကို ပြင်ပေးပြီး ရိုးရိုးသားသားလုပ်ကိုင် စားသောက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုသေးကတော့ လူပုံကသေးသေး၊ဖြူဖြူပျော့ပျော့လေး ဖြစ်ပေမယ့် လူထုလှုပ်ရှားမှုတွေမှာဆိုရင် တက်တက်ကြွကြွနဲ့ရှေ့ဆုံးကနေပါဝင်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုသေး ကျဆုံးမယ့်နေ့ကဆိုရင်လည်း အိမ်မှာပန်ကာပြင်နေရင်း လူအင်အားလိုလို့လာဝိုင်းပေးကြပါဆိုပြီးခေါ်တယ်ကြားလို့ ညီအစ်ကိုတွေ ထွက်လိုက်သွားကြတာ … Read more
Categories KNOWLEDGE, သတင်း
ပွဲကတော့စပြီ အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးစတင်ထွက်ခွါပြီ ၀င်သာဖတ်ကြည့်တော့
ပွဲကတော့စပြီအမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဂျပန်သို့ထွက်ခွာ အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး ယနေ့ ဂျပန်နိုင်ငံသို့ ထွက်ခွာသွားပြီ။ အင်ဒို ပစီဖိတိ သမုဒ္ဒရာအတွင်း စစ်ရေးအရပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရေး အတွက် သွားရောက် ဆွေးနွေး မှာဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးအလေးထား ဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပြီး တရုတ်နိုင်ငံအနေဖြင့် မြန်မာစစ်တပ်အပေါ် လူသတ်အားပေးလုပ်ရပ်မျိုးကိုလက်မခံရန် မိမိတို့ အမေရိကန် ဂျပန် သြစတေးလျ အိန္ဒိယစတဲ့ လေးနိုင်ငံ အတူတူပူးပေါင်းပြီးအလေးထားဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနမှထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ ထိရောက်တဲ့ ရလာဒ်ကောင်းထွက်ပါစေလို့ပဲမျှော်လင့်ရမှာပါ။ဒီအရေးတော်ပုံအောင်ကိုအောင်မည် ။ credit unicode ပှဲကတော့စပွီအမရေိကနျနိုငျငံခွားရေးဝနျကွီး ဂပြနျသို့ထှကျခှာ အမရေိကနျ နိုငျငံခွားရေး ဝနျကွီး ယနေ့ ဂပြနျနိုငျငံသို့ ထှကျခှာသှားပွီ။ အငျဒို ပစီဖိတိ သမုဒ်ဒရာအတှငျး စဈရေးအရပူးပေါငျးဆောငျရှကျနိုငျရေး အတှကျ သှားရောကျ ဆှေးနှေး မှာဖွဈပါတယျ။ မွနျမာ့နိုငျငံရေးအလေးထား ဆှေးနှေးမှာဖွဈပွီး တရုတျနိုငျငံအနဖွေငျ့ မွနျမာစဈတပျအပျေါ လူသတျအားပေးလုပျရပျမြိုးကိုလကျမခံရနျ … Read more
မန္တလေးမှာ သင်္ကြန်ကျင်းပမယ်လို့ ဖော်ပြ
March 19, 2021 by Padaethar
မန္တလေးမှာ သင်္ကြန်ကျင်းပမယ်လို့ ဖော်ပြ မန္တလေးမြို့မှာ မြန်မာ့ရိုးရာမဟာ သင်္ကြန် ပွဲတော်ကျင်းပဖို့ လုပ်ငန်းညှိနှိုင်း အစည်းအဝေးလုပ်နေတယ်လို့ မန္တလေး မြို့တော် စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ ပိုင် သတင်းစာဖြစ်တဲ့ မန္တလေးနေ့စဉ် သတင်းစာမှာ မနေ့က( ၁၈ ရက်နေ့)ဖော်ပြထားပါတယ်။ ၂၀၂၁ ခုနှစ် မြန်မာ့ရိုးရာယဉ်ကျေးမှု မဟာသင်္ကြန် ပွဲတော်(မန္တလေး)ကျင်းပရေး လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး ပြုလုပ် ၂၀၂၁ ခုနှစ် မြန်မာ့ရိုးရာယဉ်ကျေးမှု မဟာသင်္ကြန်ပွဲတော်ကျင်းပရေးလုပ်ငန်း ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကို ယနေ့ ညနေ ၃ နာရီကမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီရုံး အစည်းအဝေးခန်းမတွင် ပြုလုပ်ရာ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌ ဦးမောင်ကို တက်ရောက်အမှာစကားပြောကြားသည်။ အစည်းအဝေးသို့ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီအဖွဲ့ဝင်များ၊ မန္တလေးမြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီမှဒုတိယမြို့တော်ဝန်၊ အတွင်းရေးမှူး၊ တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူးနှင့် ဌာနမှူး များ၊ ဌာနဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ကြသည်။ အစည်းအဝေးတွင် တိုင်းဒေသကြီး … Read more
March 6, 2021 by Padaethar
မနော်ဟရီ် ၄၈လမ်းမှာ လည်ပင်းကျည်ထိကျဆုံးခဲ့သော သူရဲကောင်းမှ နာရေးမချမှီ ဝင်ရောက်ပူးကပ်ပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။ သူဆက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်။မင်းတို့ကိုအန္တာရာယ်မပြုဘူး …. ငါးသားကို ငါလာကြည့်တာ…..ငါကိုအမျှမဝေပါနဲ့တဲ့ ….။ လွပ်လပ်ရေးမရမချင်း အမျှမဝေပါနဲ့တဲ့…. ကဲ လူသာသေသွားတာ ဝိဉာဉ်နဲ့ ဆက်ပီးတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်တဲ့။Crd; unicode မနျောဟရျီ ၄၈လမျးမှာ လညျပငျးကညျြထိကဆြုံးခဲ့သော သူရဲကောငျးမှ နာရေးမခမြှီ ဝငျရောကျပူးကပျပွောဆိုသှားခဲ့ပါတယျ။ သူဆကျတိုကျပှဲဝငျသှားမယျ။မငျးတို့ကိုအန်တာရာယျမပွုဘူး ….။ ငါးသားကိုငါလာကွညျ့တာ….ငါကိုအမြှမဝပေါနဲ့တဲ့ ….. လှပျလပျရေးမရမခငျြး အမြှမဝပေါနဲ့တဲ့…. ကဲ လူသာသသှေားတာ ဝိဉာဉျနဲ့ ဆကျပီးတိုကျပှဲဝငျသှားမယျတဲ့။Crd;
ဖေဖေ ရောက်သွားတာ စစ်မြေပြင်တခု…ရင်ဘတ်ကြီးကွဲထွက်သွားတဲ့နေ့ပါ သမီးလေးရေ ….
March 3, 2021 by Padaethar
တဦးတည်းသောသမီးလေး လမ်းပေါ်ထွက်တာ စိတ်မပူဘူးလား လို့ သူများတွေမေးရင်… သမီးကို စိတ်မပူဘူး … လို့ပဲ ကျနော်ပြန်ဖြေနေခဲ့တာ… သမီးက သွက်တဲ့ကလေး …ထက်တဲ့ကလေး … ငယ်ငယ်လေးကတည်းက ဖေဖေဂုဏ်ယူခဲ့ရတဲ့သမီးလေး … Gz လေးတယောက်မို့ … ဒီမိုကရေစီတိုက်ပွဲမှာ သူစိတ်အားထက်သန်သလို…. တထောင့်တနေရာက ပြည်သူနဲ့အတူ ရှိနေခဲ့တဲ့ သမီးလေး … ချစ်လွန်းလို့ ပ်ုးဥလေးလို မွေးထားပေမဲ့… တိုက်ကွမ်ဒိုတွေ ကရာတေးတွေဝါသနာပါတော့လည်း သင်ခိုင်းစေခဲ့တာပါပဲ … သမီးလေးက…ဖေဖေ့အသည်းကျော်လေးမို့…. ဖေဖေ့ဆံပင်ဆေးဆိုးတာကအစ သမီးလက်လေးနဲ့… ထိတွေ့မှ ဖေဖေစိတ်တိုင်းကျတာ… မနက်က သမီးသူငယ်ချင်းတွေ နဲ့အတူ ထွက်သွားတယ်… သမီးတို့Gz လေးတွေရဲ့ ကျောပြင်လေးတွေ ငေးရင်း …. ခါတိုင်းလိုပဲ………… နေ့လည်သမီးပြန်လာမဲ့အချိန်စောင့်ပီး…. keyboard ဖိုက်တာလုပ်ဖို့က ဖေဖေ့တာဝန်လေ… နေ့လည် ph … Read more
အိမ်က မထွက်ခင်မှာ အမေဟာ မှာတမ်းခြွေတယ်…(ဖတ်နေရင်းကို မျက်ရည်မထိန်းနိုင်ဘူး…)
February 10, 2021 February 10, 2021 by Padaethar
” သမီးပြန်အလာ မမျှော်နဲ့တော့အမေ ” အိမ်ကမထွက်ခင်မှာအမေဟာ မှာတမ်းခြွေတယ်….။ “ငါ့သမီးဂရုစိုက်နော် မေမေ စိတ်ပူတယ်” တဲ့….. ဆိုင်ကယ်ဦးထုတ်လေးက မေမေ့အကာအကွယ်ပါပေါ့…..။ ဘယ်သူက ထင်ထားမှာလဲ မေမေ….. ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒပြနေတဲ့ပြည်သူတွေကို…. ရေပိုက်တွေ မျက်ရည်ယိုဗုံးတွေနဲ့ဖြိုခွဲကြမယ်လို့…. သမီးတို့က စည်းကျော်လာကြတာလည်းမဟုတ်…. အကာအကွယ် ယူလိုက်တာတောင် ….. သမီးကိုထိအောင်ပစ်ကြတယ် မေမေ…. နေတောင်ညိုရောပေါ့….. သမီးပြန်အလာ မျှော်နေတဲ့မေမေ…. အရိပ်လေးတောင် မတွေ့ရတဲ့အခါ….. ရင်ထဲလှိုက်ဖိုငိုကြွေးနေမလား…. ဒါမှမဟုတ် ….. ပြန်လာသမျှ လမ်းသွားလမ်းလာတွေကို….. ငါ့သမီးလေးရော….. မြသက်သက်ခိုင်လေးရောလို့…… တွေ့သမျှအကုန် လိုက်မေးနေမလား…. မေ့မေ့ကျေးဇူးကြွေး မဆပ်ရသေးပါဘူး…. ဒါပေမယ့် တိုင်းပြည်တာဝန်ကျေပွန်ခဲ့ပါတယ်…. တစ်ချိန်မှာလူတွေက နင့်သမီးရောလို့မေးကြတဲ့အခါ….. “ကျွန်မသမီးလေးဟာ သူရဲကောင်းမလေးပါ”လို့….. မေမေ ဂုဏ်ယူစွာ ထုတ်ပြောနိုင်ပါတယ်မေမေ…။ ဖတ်နေရင်းကိုမျက်ရည်မထိန်းနိုင်ဘူး….။ စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကျဆုံးပါစေ … Read more
သူငယ်ချင်းရေးလိုက်တဲ့ ငါတို့တစ်တွေ အရင်လိုပြန်ဆုံချင်သေးတယ်ဟာ….
February 9, 2021 by Padaethar
သူငယ်ချင်း ငါတို့ကနင့်ကို RIPဆိုပြီး ဂုဏ်ပြုချင်တာမဟုတ်ဘူး ။ ငါတို့လုပ်ဘူးခု့တဲ့ ကုသိုလ်နဲ့ နင်အမြန်ဆုံးသက်သာဖို့ မျော်လင့်နေပါတယ်…။ သူငယ်ချင်း အရာအားလုံးအတွက် အားတင်းထားပါနော်….ငါတို့တစ်တွေ အရင်လိုပြန်ဆုံချင်သေးတယ်ဟာ….။ဒုတိယ မိသားစုဖြစ်နေတဲ့ သူငယ်ချင်းရေ…..။ သေမင်းတံခါးဝက ပြန်လာပေးပါနော်….။ ငါတို့တစ်တွေနင့်ကို အားလုံးမျော်နေတယ် အားတင်းထားပါနော်….။ ငါတို့တွေ အားလုံးအတွက် အသက်ဆက်ရှင်ပေးပါနော်…။crd unicode သူငယျခငျြး ငါတို့ကနငျ့ကို RIPဆိုပွီး ဂုဏျပွုခငျြတာမဟုတျဘူး ။ ငါတို့လုပျဘူးခု့တဲ့ ကုသိုလျနဲ့ နငျအမွနျဆုံးသကျသာဖို့ မြျောလငျ့နပေါတယျ…။ သူငယျခငျြး အရာအားလုံးအတှကျ အားတငျးထားပါနျော….ငါတို့တဈတှေ အရငျလိုပွနျဆုံခငျြသေးတယျဟာ….။ဒုတိယ မိသားစုဖွဈနတေဲ့ သူငယျခငျြးရေ…..။ သမေငျးတံခါးဝက ပွနျလာပေးပါနျော….။ ငါတို့တဈတှနေငျ့ကို အားလုံးမြျောနတေယျ အားတငျးထားပါနျော….။ ငါတို့တှေ အားလုံးအတှကျ အသကျဆကျရှငျပေးပါနျော…။crd